Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa, ILQSOfi Koolleejjii Poolisii Oromiyaa qorate.
Raawwii Manneen Murtiin walqabatee, si’aayinaafi dhaqqabummaa tajaajilaa teeknoloojiin deeggaruuf jalqabbiin jiru, bilisummaafi itti gaafatamummaa abbaa seerummaa diriirsuun hojii hojjetame korichi cimina jedhe. Gama biraan, kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa si’ataafi qulqullina qabu ummataaf kennuu irratti hojiiwwan hojjetaman gaarii ta’anis, hojiin qulqullina kenna tajaajila abbaa seerummaan walqabatee jirus xiyyeeffannoo barbaada jedheera.
Kenniinsa tajaajila Abbaa Alangaa dhaqqabamaafi si’aayina akka qabaatuuf istaandaardii yeroo kennameen xumuuruuf, qulqullinaafi bu’a qabeessummaa tajaajila abbaa alangaa dabaluun, daawwannaa buufata poolisii 44fi manneen amala sirreessaa 14 keessatti taasifameen qabiinsaafi kabajamuu mirga namoomaa ilaaluun qaamolee sarbamiinsa mirga dhala namaa geessisan 40 irratti himannaa banameen 30 irratti addabbiin balleessaa kennamuun akka ciminaatti ilaalameera.
Haa ta’u malee, qaamolee hawaasaa miil. 7f hubannoo seeraa uumuuf karoorfame raawwiin miil. 2.52 raawwachuun, eeruuwwan ummataa qulqulleessuun xumuuruufi harcaatii xiqqeessuun walqabatee, qindoominni Abbaa Alangaafi Poolisii gidduu jiru laafaa ta’uun, seerota Caffeen bahaniif Dambiifi Qajeelfama yeroon baasuufi hojiirra oolchuun walqabatee qabxiilee akka hanqinaatti ilaalamanidha.
Gama hojiiwwan nageenyaafi olaantummaa seeraa kabachiisuun walqabatee, sochiin nageenyaafi olaantummaa seeraa naannicha keessatti kabachiisuuf hanga aarsaa lubbuutti qaamolee nageenyaan taasifame, qindoominni caasaa nageenyaa jidduu jiru, walitti dhufeenya naannolee ollaa waliin jiru cimsuun walqabatee raawwiin jiru akka ciminaatti madaalamee jira.
Gama biraan, raawwiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu waliigalaan yoo ilaalamu gaarii ta’us, godinaalee hunda keessatti walfakkaachuu dhabuun, daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa to’achuf raawwiin jiru bakka hundatti xiyyeeffannoon hordofuu dhabuufi harcaatiin kan jiru ta’uus koreen ilaaleera.
Walumaagalatti, nageenya naannichaa amansiisaa gochuufi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii roga maraan hojjetameen jijjiiramni dhufe yoo jiraatellee bakka hundatti karaa walfakkaataa ta’een raawwachuu irratti hanqinni kan jiru ta’uu ibsuun manneen hojii dhimmi ilaalu hundi qindoominaan yeroo hafe keessatti hojjechuu akka qaban Dura Taa’aan Korichaa Obbo Issaa Boruu akeekaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Waayee Caffee Argachuuf:
Toorbee kana 9288
Ji'a kana 53520
2008 irraa eggalee 4723512